KhabarSamachar | भीम रावलले भन्छन् : कार्यकर्ताको चाहाना भए अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने
भीम रावलले भन्छन् : कार्यकर्ताको चाहाना भए अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने
२०७८ कार्तिक २३, मंगलवार २०:२७
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन् । मंगलबार गृह जिल्ला अछाम पुगेका रावलले पार्टी एकता जोगाउन दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिने बताए ।
साँफेबगर नगर कमिटीको बैठकमा रावलले भने, ‘तपाईंहरु जेमा उठ् भन्नु हुन्छ, त्यसैमा उठ्छु । यदि तपाईंहरुको पनि यहाँ केही छ भने भनिहाल्नुहोस् ।’ फ्लोरबाट आवाज आयो, ‘अध्यक्षमा ।’यसपछि रावलले भने, ‘प्रस्तावै रहेछ । म यो आवाजलाई कमजोर हुन दिन्नँ ।’ उपाध्यक्ष रावलले हार्ने जित्नेको चिन्ता नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘यो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईंहरुको स्वाभिमान, भावनालाई झण्डा चाहिँ बलियो गरी समात्छु । हार्ने जित्ने कुराको चिन्तै नगर्नुहोस्’, उनले भने । महाधिवेशनमा कतिपय साथीहरूले तपाईं केमा उठ्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। मैले तपाईंहरू जेमा उठ भन्नुहुन्छ म त्यसैमा उठ्छु भनेको छु,’रावलले भने,’तपाईंहरूको पनि केही छ भने भन्नुहोस्।’
सम्बोधनका क्रममा उनले चुनाव लड्दा हार-जित हुने भन्दै केपी ओलीदेखि माधवकुमार नेपाल पनि पटक-पटक हारेको चर्चा गरे। उनले नेता/कार्यकर्ताको स्वाभिमान कमजोर हुन नदिने पनि बताए।
‘केही साथीहरु हारेपछि के गर्ने भनेर सोध्छन्। तर, चुनावमा लडेपछि नहार्ने को छ? केपी ओलीले आठौं महाधिवेशन हारेका होइनन् र? त्यो बेला हामी एकै प्यानलमा थियौं। म उपाध्यक्षमा हारेँ,’ उनले भने, ‘चुनावको कुरा गर्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचनमा ओली झापाबाट चुनाव हारेका होइनन् र? अनि माधव नेपालले काठमाडौंबाट हारेका होइनन् र? हार्ने कुरा के ठूलो कुरा भयो र!’
चुनावमा हारजित भइरहने उनको भनाइ थियो । ‘नहार्ने कोे छ ? केपी ओलीजी हारेको थिएन, हारेको थियो । केपी ओलीसँग एउटै प्यानलमा थिएँ, उहाँ अध्यक्षमा हार्नुभयो, म उपाध्यक्षमा’ उनले उदाहरण दिए, ‘केपी ओली झापामा हार्नुभएको छैन ? म संविधानसभामा हारेको हो । माधव नेपालले हारेको छैन काठमाडौंमा ।’
साँफेबगर नगर कमिटीको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्ष शब्दको प्रयोग नगरे पनि उम्मेदवार बनेर हार्न तयार रहेको समेत बताएका थिए।
उनले पार्टीलाई एकताबद्ध गराएर १० बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पार्टी अध्यक्षले जारी गरेको अपानि १२ कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। यसका लागि अध्यक्षले नमानेमा उनको व्यवहार अनुसारको संघर्ष गर्ने समेत रावलले चेतावनी दिए।